I-Anse Mitan belvedere - I-Airbnb
I-Anse Mitan belvedere
Les Trois-Îlets, i-Martinique
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Jérôme
At inhliziyo Pointe du Ukunqwamana, izitolo zayo, imigoqo kanye zokudlela, imizuzu 5 nihambe kusukela emabhishi ayo, kodwa esimweni nokunokuthula ngokuzinikela umbono oncomekayo, amakamelo ethu isendaweni enhle ukujabulela ukuphila ezishisayo bethola Martinique. Futhi ngezinsuku zokuphumula ungakhetha phakathi kokubhukuda echibini lokubhukuda, kwelinye lamabhishi amathathu e-peninsula, noma ukuthanda uLwandle lweCaribbean kusuka ku-hammock endaweni yakho yangasese.
Amakamelo ethu okulala amabili atholakala esitezi sokuqala sendlu, azimele futhi womabili abheke ithala. I-swimming pool isengadini futhi ingena mahhala. Indawo yokupaka yangasese iyatholakala.
Le ndlu iyindawo ekahle yokuphumula futhi ujabulele ngokugcwele ukuphila ezindaweni ezishisayo. Amabhishi ase-Anse Mitan, Bakoua kanye ne-Le Méridien amaminithi ambalwa nje uma uhamba ngezinyawo. Ukuze uthole olunye sporty amaholide, base lokufundela ukushayela imikhumbi engu-10 ukuhamba kude, ungaya kuphi surfing ikhayithi, Windsurfing, buoys towed, paragliding, njll eziningana diving amakilabhu oyokuthola ngokufunda ngesikhathi marina sikunikeze hambo, kanye uhamba ukuze ukuhlangabezana namahlengethwa. Kubathandi bokugibela amahhashi, i-Jack ranch iqhele ngemizuzu eyi-10 ngemoto, kanye nenkundla yegalofu i-Trois Îlets.
Izitolo eziningi kanye nemakethe encane zivulwa nsuku zonke. Ekugcineni, ngesidlo sasemini nesakusihlwa, izindawo zokudlela eziningi namabha kuzokuvumela ukuthi uthole ukudla kwase-Caribbean futhi ujabulele ubusuku basezindaweni ezishisayo, yonke imizuzu embalwa uhamba ngezinyawo.
Ngizoba onakho ukukunikeza lonke ulwazi ozoludinga ngokuhlala kwakho. Ngingakujabulela ukukubhalela zonke izindawo ezinhle zokwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki.